केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ ? -
केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ ?
अखबार पाटी २८ माघ २०७७, बुधबार १६:३७
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विरोध प्रदर्शन कस्तो हुन्छ हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ ९ मा गरेको सभा गरेको दिन ओलीले सभा भनेको कस्तो हुन्छ माघ २३ गते देखाउने बताएका थिए । त्यसै अनुरुप ओली समूहले बुधवार काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।